Vondrona eoropeanina : tsy mahafa-po ny ezaky ny fanjakana | NewsMada
Toy ny Banky iraisam-pirenena ihany, tsy mahafa-po ny Vondrona eoropeanina (UE,) hatreto, ny ezaky ny fanjakana malagasy. Voakasik’izany ny sehatry ny lalana, ny tsy fisin’ny Fitsarana avo ho an’ny mpitondra (HCJ), indrindra ny tsy fanasaziana ny mpanao trafika andramena.
Tafahaona, omaly, ny firenena mpikambana ao amin’ny Vondrona eoropeanina (UE), andaniny, sy ny governemanta malagasy ankilany. Anisan’ny votoatin’ny fotoana ny famatsiam-bola eoropeanina ho an’i Madagsikara. Toy ny an’ny Banky iraisam-pirenena ihany, nilaza i Antonio Sanchez-Benedito, solontenan’ny UE, miasa eto Madagasikara, fa “tsy afa-po 100% izy ireo amin’ny ezaka ataon’ny mpitondra malagasy”. Ao anatin’izany ny fanamboaran-dalana, na efa mandoa ampahany ihany aza ny mpampiasa lalana (Fer). Tsy tafapetraka ny Rafi-pitsarana avo, Haute cour de justice (HCJ), tara ny fikarakarana fifidianana, marefo ny fitantanam-bolam-panjakana, tsy voajerin’ny fanjakana ny laharam-pahemahena amin’ny sosialy.
Na izany aza, mahatsapa ny UE fa tsy ampy ny vola ampiasain’ny fanjakana malagasy. Mila tohizana ny ezaka anefa, mila marin-toerana ny fitantanana ny toekarena ankapobeny sy ny politika.
Mihena ny famatsiam-bola
Nasiany teny koa ny lafiny andramena. Itarafana ny fisian’ny fanjakana tsara tantana na tsia ny famaizana ny mpanao trafika. Ekena fa misy ny lalàna, fa andrasana ny tena fampiharana azy.
Miankina amin’ny vokatra vitan’ny fanjakana malagasy ny hivoahan’ny famatsiam-bolan’ny UE. Nahenany 11,5 tapitrisa euros ny famatsiam-bola Tahiry eoropeanina ho an’ny fampandrosoana (Fed) andiany faha-11, raha tokony ho 13 tapitrsia euros. Na izany aza, tsy very ireny ambim-bola ireny fa azo ampidirina ao anatin’ny famatsiam-bola manaraka rehefa mihatsara ny ezaky ny fanjakana.
Mifanaraka koa anefa ry zareo samy mpamatsy vola. Hanamarinana izany, nilaza i Antonio Sanchez- Benedito, fa ho avy koa ny fiaraha-midinika amin’ny Tahirim-bola iraisam-pirenena (FMI), mikasika ny fahazoana an’ilay Fanamorana ny fahazoana findramam-bola. Anisan’ny fepetra napetrak’ireo mpamatsy vola vahiny ireo ny fanjakana tsara tantana, ny tena fahaleovantenan’ny fitsarana, ny fanohizana ny fifanakalozam-barotra malalaka ao anatin’ny APE, ny fikaonandoha amin’ny sehatra tsy miankina.